Home » Creative Writing » သစ်ရွက်ဟောင်းရဲ့ ရာဇ၀င်
မမြင်ဖူးပါဘူးလို့ ရာဇဝင်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ၂၀၁၀ ကတည်းက မဝင်ဖြစ်ပဲ ခုမှ ပြန်ဝင်လာတာကိုးး
မမဂျီး ..ဇီးယိုဆိုလို့ ..ဇီးယို စားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ… ဒီရာသီနဲ့ တည့်တယ်လေ… ဟီးးး
မြင်အစား ကြားအစားလဲ မရ၀ူး.. စိတ်က..
ဗာဒံလား ဗန်ဒါလား ဗန်နာလား…အဲ့လိုအခေါ်အဝေါ် အမြဲ ချာချာလည်ပြီး အလျဉ်းသင့်သလို ပါးစပ်ထဲတွေ့ရာတစ်ခုခု ခေါ်နေတဲ့ အပင်…၊ သူ့အရွက် ပြန့်ပြန့်ကြီးတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား.. အိမ်မယ်တော့ အဲ့အပင် မရှိဘူးရယ်…။ သူ ကိုင်းကွေးတာတွေလဲလှပေမယ့်.. စိန်ပန်းအကွေးကို ပိုကြိုက်လို့ စိန်ပန်းပင်ပဲ စိုက်ထားတာ…။
ခင်​​ဈော်​ ညည်းက ဗြဟ္မဏ လား ? မသိလို့​မေးတာ​နော်​ စွတ်​​ပြောလိုက်​ရင်​ သူဂျီး စည်းကမ်းချက်​နဲ့ ညှိမှာစိုးလို့
အိမ်မှာရယ်တော့ မဟွတ်ဘူး.. အိမ်ပေါ်ကို တက်တဲ့ လမ်းလေးဘေးမှာ..။ ကိုယ်ပြန်လာတဲ့အချိန် သူ့အကိုင်းမိုးတာ သဘောကျလို့… (အဟေးးးးး အသက်သာကြီးတာ ဒါမိုးကလဲ တချက်တချက် ဖောက်တယ်…ဟီးးး)
စိန်ပန်းကြွေတွေ အနီရောင်ကြားမှာ အဝါတောက်တောက်လေး ဒါမှမဟုတ် အဖြူစွတ်စွတ်လေး ဝတ်ရိုက်။
ဗာဒံပင်က ၇ ဆင့် ထိတောင်မရှိရဘူးလို့တော့ကြားဖူးတယ်။ ၇ဆင့်ပြည့်ရင် အိမ်ကလူထွက်တတ်တယ်တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ ကြားဖူးတာလေးပြောပြတာ။ ဒီအချိန်လေး ဗာဒံရွက်စိမ်းလေးတွေကို ကြည့်ရတာတော့ သဘောကျတယ်ဗျာ။ စိန်ပန်းပင်တော့ နွေနေအပူမှာမကြည့်ရဲဘူး။ မျက်စိကျိန်းတတ်တယ်လို့ ကြားဖူးလို့။ ဟုတ်မဟုတ်မသိပါဘူးဗျာ။ ကြားဖူးနားဝလေးတွေကို ပြန်ရှယ်တာပါ။ စိန်ပန်းကြွေတွေပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာတော့ သဘောကျသဗျို့။
ဗာဒံ (သို့မှုန့်) ဗန်ဒါပင်တွေ မြင်ရင်….
အရသာ တကယ်ရှိတဲ့ အရသာတွေဘက်ပဲ…စိတ်ကရောက်..